Ukuntywila kweAdobe kuVumelo lokuThengisa kunye neNkqubo yabo yoLungiselelo lwezixhobo | Martech Zone
Umphathi wamava eAdobe (AEM) kunye neDigital Publishing Suite (DPS) yokudibanisa ukuvumela amaqela ezentengiso ukuba enze, apapashe kwaye enze ukuba usetyenziso lomxholo osisiseko somxholo. Kungenxa yokuba izixhobo zomthonyama zeAdobe zisetyenzisiwe, ividiyo, iaudiyo, oopopayi kunye nezinye izinto ezisebenzayo zinokusetyenziswa kunye nokwakhelwa ngaphakathi kubahlalutyi -Ngaphandle kwesidingo salo naluphi na uphuhliso okanye ukufuduka kweqela lesithathu.
I-Adobe isungule Isixhobo seAdobe sokuLungela, Ukuvumela amaqela okuthengisa eAdobe ukuba enze ngokwezifiso iintetho zabathengi besebenzisa isicelo esidityanisiweyo kwii-iPads zabo - apho banokuvelisa khona iidemo zemveliso, ukufikelela kwisibambiso sentengiso, kunye nokugcina iiasethi zedijithali ezinje ngeePDF, imiboniso kunye neminye imithombo yeendaba.
I-Adobe iqhuba ukuthengisa ukuvumela kunye nefuthe kuyo Ukulungela isixhobo sezixhobo iveliswe kusetyenziswa iDPS kunye noMphathi wamava eAdobe. Uhlelo lokusebenza lwentengiso luxhobisa abameli ngemiyalezo yokunxibelelana kwifomathi yethebhulethi, kwaye ihambisa ukubonakala kwintsebenzo ngokudityaniswa kweCRM kunye ne-Salesforce.com.
Isixhobo sokulungiselela sikwabandakanya nokudityaniswa kweCRM ukuze umxholo ungahlalutywa kwaye ubonakaliswe ngokuthe ngqo kwintsebenzo yengeniso. I-Adobe inika ingxelo ngemijikelezo emifutshane yokuthengisa, ukwenza lula ukwenza ngokwezifiso, ukubonelela ngomthombo omnye wezixhobo kubasebenzi babo ngohlaziyo oluzenzekelayo kunye notyhilo lwezaziso. Ungalukhuphela ityala kwimeko I-Adobe, ifinyeze uMjikelo weNtengiso.
Izibonelelo eziphambili zibandakanya:
Abathengisi banokuthengisa ukufikelela, ukwazisa, kunye nokukhuphela Umxholo wemultimedia ukusuka kwiitafile zabo.
Yiyo ngokukhawuleza kwaye kulula ukuyipapasha izinto ezintsha ezinokutshintshwa ngokwezifiso kwinethiwekhi yonke yeempendulo.
Izinto zokuthengisa eziyimfuneko zikwindawo enye, zihlala zikho ngoku, kwaye zihlala zihlala zikhona ifumaneka ngaphandle kweintanethi.
Yiyo idityaniswe neCRM ke abathengisi banokubona into enxibelelana nabathengi kunye nokucokisa umxholo wentsebenzo engcono.
Olu lutshintsho kumdlalo ngombono wam. Indawo yokunika amandla yentengiso ubukhulu becala ityiwe ngamaqonga eqela lesithathu afuna ukufuduswa komxholo kunye nemveliso yemveli. I-Adobe idlula kwezi zixhobo zomntu wesithathu kwaye ivumela ukugcinwa, ukuhlaziywa kunye nokuhanjiswa kwezibambiso zentengiso ezivela kumyili, ngenkqubo yokuvunywa kwe-AEM, kwaye ngokuthe ngqo ezandleni zeqela elithengisayo.
tags: zodakadps zedobeUmphathi wamava eAdobeIzixhobo zokulungela i-adobeCRMisixhobo sokushicilela sedijithalidpsizixhobo zokulungelaUkunika amandla ukuthengisa
Iintsomi malunga noKwabelana ngoLuntu